Waa madax xanuun ku darto xiriirada si iPhone ah, gaar ahaan marka aad iska ilaawaan jir iPhone ee ka mid cusub. Nasiib wanaag, waxaa tahay waxyaabo badan oo la heli karo, oo ha aad si fudud u hagaagsan iPhone xiriir la leh xisaabaadka. Tan iyo xisaabaadka u yimaadeen inay u isticmaalaan, uma baahnid inaad wax laga walwalo xiriir ah mar kasta oo aad ka heli iPhone cusub. Halkii, kaliya aad u baahan tahay in aad u hagaagsan aad iPhone la xisaabta taas oo uu ku badbaadi oo dhan xiriirada ku yaal.
Lahayn fikrad cad ah oo ku saabsan sida loo hagaagsan xiriirada iPhone? Ha welwelin. Ma ahan adag. Waxaa ka mid ah xisaab dhan, xisaabta Gmail waa mid ka mid ah oo caan ah, oo si weyn loo isticmaalo. Sidaas darteed, qodobkan, waxaana idin tusin doonaa sida loo hagaagsan iPhone xiriir la Gmail. By jidkii, xisaabta Gmail sidoo kale awood u aad u hagaagsan Google jadwalka la iPhone, sidaas sameeyo hawlaha.
Syncing aad xisaabta Gmail iyadoo la kaashanayo iPhone aad si fudud u helaan aad
Qaybta 1. Talaabooyinka in nidaameed iPhone Xiriirada in Gmail Qaybta 2. Tallaabooyinka nidaameed iPhone kalandar si Gmail
Qaybta 1. Talaabooyinka si hagaagsan iPhone Xiriirada in Gmail
Halkan waa tallaabo-tallaabo hage ku saabsan sida loo hagaagsan Gmail xiriir la iPhone. Waa kala duwan. Waxaad dooran kartaa hanuun saxda ah si waafaqsan iPhone iyo macruufka
1. Raac tutorial hoose marka iPhone waddaa macruufka 7
Tallaabada 1. Tag Settings aad iPhone. Hoos shaashadda si aad u hesho Mail, Xiriirada, Kalandarada .
Tallaabada 2. Tubada dar xisaabta iyo dooran Google.
Tallaabada 3. Buuxi macluumaadka account Google, oo ay ku jiraan, magacaaga, email, password, description.
Tallaabada 4. Tubada Next . Markaas, shid Xiriirada . Markaas, ka jaftaa Save .
2. Raac tutorial hoose marka iPhone waddaa macruufka 6 ama 5
Tallaabada 1. aad iPhone, tuubada Settings . On screen Settings ah, doortaan Mail, Xiriirada, Kalandarada .
Tallaabada 2. Tubada dar xisaabta iyo doorasho kale .
Tallaabada 3. Dooro dar CardDAV Account. Ku qor macluumaadka, waxaad tidhaahdaan, server, magaca isticmaalaha, sirta ah iyo sharaxaad.
Tallaabada 4. Tag dhankiisii ​​midig sare oo ka jaftaa Next.
Tallaabada 5. noqda on Xiriirada inay iyaga u hagaagsan u dhexeeya Google iyo iPhone.
Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xiriirada syncing Google la iPhone .
Qaybta 2. Sida loo hagaagsan Google Kalandarada la iPhone
Tallaabada 1. Tubada Safari aad iPhone oo taga si Google Calendar page Settings nidaameed ee. Haddii aad qortey galay Google, waxa aad la isugeeyey inay sidaa sameeyaan. Tani waa sida aan page u eg.
Tallaabada 2. Dooro Settings aad iPhone. Waxay u ekaan doono sidan oo kale sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran
Tallaabada 3. Hit on Mail, Xiriirada, Calendar . Waxaad arki doonaa dhammaan xisaabaadka email aad qotomisay ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan horey u leedahay Gmail koonto ka taagay, garaac dar xisaabta , dooro Gmail iyo raac tilmaamaha.
Tallaabada 4. Dooro aad xisaabta Gmail.
Halkan waxa aad la wadaagto aad Google Xiriirada, Calendar iyo Hawlaha aad iPhone by jeestay ku tabs kala.
Haddii aad u dami. Si degdeg ah waa in aad qaadataa fariin pop ah. Tusaale ahaan waxaan dami tab iyo jadwalka heli gujisid sida in: Tubada button wuxuuna muujinayaa Delete ka iPhone .
Hadda noqon ka Calendar biiro dib. (Haddii biiro Kalandarada ahaa off markii hore, ka dibna kaliya u celin ku saabsan.)
Tallaabada 5. Aad iPhone Calendar app. Tab button Kalandarada ee geeska kore ee bidix. Waxaad arki doontaa wax kasta oo aad Google Kalandarada, oo ay ku jirto la wadaago jadwalka hoos qoran qaybta Gmail ah.
Tubada on dhan jadwalka aad rabto in aad ka mid ah oo ku saabsan jadwalka. Taxan ee A muuqan doonaa si xaq ah mid kasta oo idinka doortaan. Waad beddeli kartaa wakhtigan aad rabto in aad wax. Marka aad dhamaysid, garaac button sameeyey sare ee shaashadda.
Mararka qaar waxay qaadan kartaa qaar ka mid ah waqti ay ku hagaagsan jadwal taariikheed oo idil ka servers Google. Si kastaba ha ahaatee, haddii oo dhan ayaa si fiican u, oo dhan ee jadwalka aad waa muuqdaan aad jadwalka la mid ah sida ay u badbaadin ee Google Calendar.
Dhaqaaq walba oo iPhone in PC
4 Siyaabaha kaabta iPhone Xiriir
2 Siyaabaha Bedelka Playlists ka Lugood si iPhone
3 Siyaabaha Bedelka CD si iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo hagaagsan Google Xiriirada iyo Kalandarada la iPhone